त्यसपछि रुष्ट बनेको पाकिस्तानले काश्मिरमा आक्रमण गर्यो । पाकिस्तानी फौजले कबाइलियोको भेषमा काश्मिरमा आक्रमण गरेको थियो ।
पाकिस्तानले आक्रमण गरेपछि काश्मिरका राज डराए । त्यस समय काश्मिरमा एउटा आन्दोलन चर्किरहेको थियो । नेशनल कन्फ्रेन्स नामक धर्म निरपेक्ष संगठनले आन्दोलन गरेको थियो । यो आन्दोलनको नेतृत्व नेताशेख अबदुल्लाले गरेका थिए ।
यस पश्चात भारत सरकारले काश्मिरमा निष्पक्ष चुनाव हुन दिएन । यसकारण काश्मिरका जनता झन् असन्तुष्टि हुँदै गए । सन् १९८० दशक पश्चात अफगानिस्तानका केही अलकायदाका मानिसहरु काश्मिरमा आए । केही पाकिस्तानका ट्रेड मिलिटेन्ट पनि काश्मिर आए । यसले काश्मिरमा सबैभन्दा ठुलो हिंसाको वातावरण बनायो । तीन प्रकारका आतंकवादीले काश्मिरमा आतंक मच्चाउने काम गरे ।
यसले भारतलाई झन् असुरक्षित बनाएको भन्दै भारतीय सेनाको संख्यामा उल्लेख वृद्धि गरियो । यसपछि अलगाववादमा आतंवादको रुप लिन थाल्यो । काश्मिरियत जुन काश्मिरको सभ्यता हो यो तीन सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । १. वेदान्तको मुल्य, २.सुफी शिक्षा, ३. बौद्ध धर्मको सिद्धान्त । तर, १९८० को दशकमा आतंवादले चरम रुप लिन लाग्यो तब आतंकवादीहरुले काश्मिरी पण्डितहरुलाई यातना दिन थाले । त्यसपछि ठुलो संख्यामा उनीहरु जम्मु र अन्य क्षेत्रमा शरण लिन बाध्य भए ।
काश्मिरका मुसलमानहरुले पनि काश्मिर छोड्दै अन्त शरण लिन पुगे । उक्त घटना पश्चात काश्मिरका जनता दुई तरिकाले पिडित भए । ठुलो संख्यामा रहेका भारतीय सेना र आतंवादीहरुको निशानामा काश्मिरका जनताहरु परे । सन् २००२ मा निष्पक्ष चुनाव भएपछि भने काश्मिरमा केही आशाहरु जागे ।
तर, बिजेपीका नेता बिके सिन्हाले अमरनाथ यात्रालाई नयाँ बोर्ड गठन गरे र अमरनाथको यात्रालाई एउटा साम्प्रदायिकको नाम दिए । यसका कारण ती जागेका आशाहरु पनि मरेर गए ।
अमरनाथको यात्रा स्थानीय मुसलमानहरुले आयोजित गर्ने गर्थे । स्थानीय मुलमानहरुको हातबाट लिएर भारत सरकारले अमरनाथ बोर्डलाई जिम्मा लगाइदियो । सरकारले जंगलको जमिन अमरनाथ बोर्डलाई जिम्मा लगाइदियो । यसका कारण काश्मिरका जनताले पुनः असन्तोष जाहेर गरे । यही कारण पनि आज पनि काश्मिरमा हिंसाका घटनाहरु भइरहेका छन् ।